Satọde, Ọgọstụ 15, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
"Ugbu a ka m matara ihe kpatara ịchọrọ ịkpọ m asị!", Kụrụ Chris (ala Limp Bizkit) n'otu oge na mkparịta ụka. Ajụjụ a na-ezo aka na ihe na-eweta ndị kpọrọ asị na mgbasa ozi mgbasa ozi. Nke bụ eziokwu bụ na, dị ka online personas ewu ha onwe ha ika na ịzụlite ha onwe ha olu na nka na ọrụ… ụfọdụ folks ga-asị ha maka ya. Enwere m obi abụọ na onye ọ bụla kpọrọ asị asị Chris Brogan tes mana ọ bụrụ na ha mere ya n’ihi nnukwu onyinye ya.
Chris brogan Blog maa jijiji.
Chris nwere ọmarịcha ihe nkiri slide na ngosi dị mma - gụnyere amaokwu wacky pop mara mma (gụnyere Fergy!), Mkparịta ụka ya na igwe mmadụ ahụ (na-akpasu anyị iwe maka naanị inwe ndị di na nwunye na-agba ọsọ n'ime ụlọ!), Na ngosipụta mara mma. Enwere onyinye dị ịtụnanya m na-ahụ n’okwu ndị dị ka Chris nke m na-ahụ na Malcolm Gladwell, Seth Godin na ndị ọzọ… ikike iwere okwu siri ike ma sie ike nghọta ma kọwaa ya naanị.
Brogan mere nke a na ya continuum nke oge a mbọn na otú mmadụ mgbasa ozi dabara, si Ima banyere ime ihe. Na-agụ site na post maka nkọwa, nke a bụ my synopsis:
Mmata - Itinye n'ọrụ nke ahịa dị mma iji gosi gị, ngwaahịa gị, ma ọ bụ ọrụ gị.
ige nti - Itinye n’ọrụ ndị na-ajụ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji nye ndị mmadụ ụzọ isonye.
njikọ aka - Okwado mmekọrịta gị na obodo gị.
egbu - The akakabarede… na download, na aha, na purchasezụ, wdg
Mgbatị - Ohere mgbe emechara ya iji kwalite ihe omume na nsonaazụ ya.
Chris rụrụ ọrụ dị nkọ ma sie ike ebe a ịkọwa usoro a, yabụ m ga-agbakwunye 2 cents m. (Akpọrọ m asị na ị na-eme nke a… na-eme m ka ọ dị ka m na-akụ azụ… Echere m na m bụ!) analysis.
Echere m na nyocha bụ isi… ma na mbido na njedebe nke usoro a ka azụmahịa wee nwee ike ibanye usoro ahụ na ọtụtụ ịnyịnya - yana nụchaa ma melite usoro ahụ oge ọ bụla. Nsonaazụ nsonaazụ dị mkpa ka ndị azụmaahịa wee mata ebe ha ga-esi nweta oke ego ha nwere maka oke mmetụta.
Agụbeghị akwụkwọ Chris 'na Julian - A na m atụ anya ịtụta ya ma hụ etu mmepe na etu usoro a si arụ ọrụ n'ime usoro a.
#BlogIndiana: Jason Falls, ndị na-ede blọgụ na chi ndị Google
Obi dị m ezigbo ụtọ ikwu, Doug. Enwere m nnukwu oge, na enwere m ekele ịnọnyere gị n'ime ụlọ ahụ, dịka otu n'ime ndị mmụọ ozi obodo. Echere m na ọ bara uru, m na-atụ anya ịhụ gị anya n'oge na-adịghị anya. :)
Enweghị ike ichere ka ụzọ anyị gafere ọzọ!
Aug 16, 2009 na 11:18 PM
Hey Doug, ekwenyere m na ịgbakwunye nyocha bụ ihe dị mkpa, mana echere m na ị tinyela ya na ntụpọ. M ga-eme nyocha mgbe e gbusịrị ya na tupu ndọtị, ebe mgbatị bụ mmalite, ọ bụghị njedebe.
Anọnyeere m gị, Tim. M gbalịsiri ike ịghara itinye nyocha n'etiti usoro ọ bụla! M a ngụkọta geek banyere n'ihe na nlekota. Ọtụtụ n’ime anyị na-arụsi ọrụ ike na imezu nke na anyị anaghị ewe oge.
Ọ bụ oge dị ukwuu iji soro gị nọrọ izu a, Tim! Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ntanetị post ọbịa - biko gbasapụ!